Yekumhanya bvunzo: Galaxy Cherechedzo 7 vs. iPhone 6s | IPhone nhau
Yekumhanyisa bvunzo: Galaxy Note 7 vs iPhone 6s
Pablo Aparicio | | Android, Kupikisana, iPhone 6s
Zvagara zvichitaurwa kuti kuenzanisa kune ruvengo, asi isu hatimbomira kana kuti hatizombomira kuzviita. Iyo yazvino foni yakaziviswa ne Samsung ndiyo Cherechedza 7, mudziyo une Exynos 8890 octa-core processor uye 4GB ye RAM inotyaira 2-inch 5.7K skrini. Nhare dzekupedzisira dzakaburitswa neApple ndidzo iPhone 6s uye iyo iPhone 6s Plus, zvese zvine A9 mbiri-musimboti processor uye 2GB ye RAM, asi iyo 4.7-inch modhi, iyo yavakashandisa mukuenzanisa uku, ine 1.334-na-750 resolution resolution.
Imwe yemiyedzo inoitwa nekukurumidza kana iwe uchinge waisa maoko ako pane chishandiso changoburitswa ndiyo yekumhanyisa bvunzo. Kuti uite izvi, tora zviteshi zviviri uye nguva inotora nguva yakareba sei kuvhura akawanda maapplication, mune dzimwe nguva vachiita makumbo maviri, yechipiri kutarisa maitiro avo nemaapplication akavhurwa kumashure. Ndeupi achakunda mumujaho uyu: iyo Galaxy Note 7 kana iyo iPhone 6s?
Sezvauri kuona muvhidhiyo, kurova kwakakosha kwazvo. Sezvatakambotaura pakutanga kwenyaya ino, kuenzanisa kune ruvengo uye tiri kutaura pamusoro pezvakasiyana zvishandiso, kutanga nemusiyano muhukuru hwechidzitiro uye kupedzisa neiyo sisitimu yekushandisa inoshandiswa neese maviri matemu. Android Marshmallow mune iyo Mucherechedzo 7 uye iOS 9 mune iyo iPhone 6s.
Vadziviriri veiyo Galaxy Note 7 vanoti, nechikonzero, kuti iyo terminal yeiyo hofori yeKorea inofanirwa tora basa rakawanda, asi vadziviriri veiyo iPhone 6s vanoti, pasina chikonzero chidiki, kuti chinhu chakakosha pamusoro pechigadzirwa ndechekuti inozvibata sei mukushandisa kwezuva nezuva uye chii chakanakira macores mazhinji, RAM uye resolution kana pakupedzisira vachizoremedza mashandiro e kombiyuta? Unosarudza chii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6s » Yekumhanyisa bvunzo: Galaxy Note 7 vs iPhone 6s
Ivo vanofanirwa kumirira uye kugadzira tes neIOS 10 iyo mitsara inoenda semheni
iOS inogara uye ichaenda nekukurumidza kupfuura Android, iyo sisitimu yakanyatsogadziriswa, Android isimba rine hutsinye risingadzorwe (kuti kana octacore pa2,4ghz uye zvinhu zvakadaro uye 6gb yegondohwe) asi iyo app nehurongwa hwakadai ichokwadi marara mukugadzirisa uye ndiyo hombe workhorse yeiyo android kudzamara iyo isina kugadziriswa iOS ichagara iri chishongo mukorona.
Kuona vhidhiyo zvinoita senge kwandiri zvinonyadzisa pachikamu che chamchun kuti nekumhanya kwakawanda, nucleos nezvimwe muchikamu chechipiri ndinofanira kuvhura mitambo zvakare uye zvese zvese ... muchidimbu, hapana makomendi
Zvakare katsamba ndakakanganwa… .. Iyo Hardware yeCherechedzo imhuka chaiyo uye iyo iPhone marara asi hazvo…. Tiri kuzomira padzinde remuti wemaperera…. Kugonesa kweIOS kune hutsinye uchienzaniswa ne android
Zvakanaka, asi kutanga ini ndinofanira kuona iyo mitambo yakavhurwa uye ichitamba seiyo iPhone, kunze kweizvozvo iwe haugone kuona kana paine chero akavhurwa maapplication mune multitasking, ndinoshuva dai yaive, asi handizvo, ndinotarisira zvakawanda kubva IOS 10, muchidimbu, isina basa vhidhiyo kungo gadzira fanboy kushanya
ufff iyo inonhuwa yegodo pano!
Pakutanga kwevhidhiyo, vhura multitasking uko iwe paunogona kuona kuti ndizvo chete zvirongwa zvekugadzirisa pazvinhu zvese zviri zviviri, wobva wavhara masetingi pane ese ari maviri uye wotanga ne «bvunzo»
Zviripachena hachisi cheyedzo bvunzo asi chinoita kuti iphone iite kupfuura yakajeka! izvo zvinovandudza gore rimwe nerimwe uye mu = Android ichiri yakamira kunyangwe vakaisa Hardware zvakapetwa kane chiuru zvine simba.
Isu tinoona matangiro anotanga kukurumidza mumaapps asingade yakawanda yekumhanyisa kugadzira, uyezve kana zvasvika pakuvhura mitambo iyo iPhone inoitora, uku kuchenesa kwakachena, Apple ine A9 uye A8 chip yakapa yakawanda simba iyo graphic processing, uye ini handina kureva kuti musimba, zvazviri, asi mukuita, uye ini ndichibheja iyo A10 ichave yakatokura zvikuru. Hakusi kuva fanboy, zviri kuitika.
Shanje izvo, kana ini ndiine iPhone 6s tarisa pamufananidzo uye iwe uchazvitarisa
ichi chakashata chakaitwa vhidhiyo yemageeks akadzora senge iwe kuti uwane mari nawo, mutambo haudaro
Yakanga yakavhurika pane iyo giraxy uye pane iphone kana ndeipi mugwara riya ndaifanira kuvhura semutambo mutsva uye zvinotora nguva yakareba, ndakaedza iyo galaxy s7 kumucheto ne iphone yangu 6s uye inoipfuura mune zvese zviri mu spidhi screen yepamusoro nezvimwe .. .., nekuti iyi nyowani nyowani kuti zvakare, nevashandisi vakapusa senge iwe zvakajairika kuti gore rega rega tinoramba tichiwana prawn uye tisingavandudze sezvichaitika ne iphone 7
Ndoinonzi muromo-wese whoosh. Uye ini ndinobvumirana newe, nema conformists iwe hausi kuenda chero kupi. Kunze kweyekuti fananidzo inofanirwa kuitwa neNexus renji. Uye kwete kunyange izvo, nekuti imwe inofambisa masikirini ekugadziriswa kwepamusoro kupfuura imwe, yakakosha kune chaicho chokwadi, semuenzaniso. Kunyangwe zvakadaro, panguva ino ini ndichiri kugara kwenguva yeiyo iOS, yeiyo system pachayo, kunyangwe paine zvikanganiso zvayo, kwete zvehardware kana dhizaini.
Musiyano uripo kana zvasvika pakumhanya mitambo ... zvirokwazvo dai pakanga pasina mitambo yaibatanidzwa, semuenzaniso ini handina chero pane yangu iPhone, iyo bvunzo yaizosiyana ... iyo resolution yeiyo skrini inoita kuti mitambo irasikirwe kuita! ! Asi zvekushandisa mazuva ese nemaApp eemazuva ese ndine chokwadi chekuti katsamba kanodya iyo 6S, ndinovimba inochinja ne i7 ... asi yakafanana nezvose ... kuravira mavara, ini ndinofarira kukwidziridzwa uye mashandiro andinopihwa neiyo iPhone ine resolution yechisimba ine hutsinye isinganzwisisike kune ziso. Asi iyo yega yega inosarudza
Asi regai tione dave iwe uchiratidza kusaziva kwako kwese, pano mainjiniya emakomputa, nei heck iwe uchida 2k skrini pane mbozhanhare? Ziso harigone kuona chero chinhu kubva pane imwe huwandu hwepikisiki. Uye ikozvino ndipo pakagadzirira kuuya kwandiri ndokundiudza resolution haina chekuita ne ppi (pixel density) nekuti ehe, iyo resolution yakawanda, inowedzera pixel density, ndiko kuti, iyo nhamba yemapikisheni padiki. Zvakanaka, pane nhare haugone kuisiyanisa kunyangwe ukaedza zvakadii, kana iwe ukaona zvirinani mhando inongova placebo uye kushambadzira mhedzisiro senge iyo iwe yaunowana kubva kuX huwandu hwemakorari asiri 10% ye maapplication anovashandisa kana kungoti Nekuti iwe unoda amoled tekinoroji zvirinani, asi tenda kwandiri, haina chekuita nekugadzirisa. Ivo vanogona kuisa 4k mune nhare kana vachida, kuti ziso rako harizokwanisa kusiyanisa huwandu hwepikiseli padiki ye1080 kana retina.
Pindura kuna Rikkk
Izvo zvinodikanwa kune akanakisa smartphone ruzivo ane chaiwoiwo magirazi, semuenzaniso, kana iwe usiri kuda kuona mapikisheni akaita sezuva. Nenzira, nekuda kwechikonzero chimwe chete chaunofumura, nei uchida 4k skrini pane 21-inch iMac iwe usiri kuzoiona kupfuura mita imwe kure kuti ushande nayo? Zvisinei…
Yakanaka imwe svikiro inotsigira iyo yepamusoro mega zvisirizvo zvemidhiya ...
Iyo iPhone, iyo iPhone, zvakakosha kutaura kuti haina basa kana tikataura nezve chaicho chokwadi. Chii chinotonhorera uye kamwe mukati unokanganwa kunyangwe iOS 999
Samsung makore akareruka kumberi mune chaiko chokwadi uye izvi hazvichachinje kana kune chero iOS
Iyo iPhone skrini yakashata zvekuti haina kukodzera kwechokwadi chaicho, Samsung iri kufambisa mhando skrini ine chiyero chechikara, kushandisa ichi chokwadi, pamwe nebhatiri uye Hardware kushandiswa uye nezvimwe zvine hutsinye asi zvese izvi chete iwe uchaona painotanga kuona kupfuura iPhone.
Zvakafanana nekutaurisa kuti munhu anokasira kumusoro nekukurumidza neSeat pane neFerrari …… yakaipa kupfuura kudyiwa kweChigaro kuri nani… ..
Ndezvipi zvisiri izvo zvinoburitswa nenhau, hakusi kungotaura nezve nharembozha yeSamsung uye zvaunoda kushandisa. Chii chaunoda 2k 4K ye? Uye zvimwe zvakawanda? Yechokwadi chaiyo
Pindura kuna Aaa
Mhoroi, Aaa. Ruzivo rwenhema mune basa? Unogona kutaura zvaunoda, asi vhidhiyo inoratidza kumhanya. Zvakafanana nekufananidza kumhanya kwemota neyeye rori: rori inogona kutakura matani, asi chero mota inosvika kunzvimbo nekukurumidza. Iyo Samsung inogona kuita chero chaunoda, sekuti iwe unondiudza zvinoita origami, asi izvo vhidhiyo iyi inoratidza kuti zvinotora nguva yakareba. Icho hachisi disinformation. Disinformation iri kutaura nezve chaicho chokwadi kana iyo posvo ichitaura nezve kumhanya.
Hongu, vhidhiyo inoratidza kumhanya, asi mumamiriro akasiyana. Mumwe anofanirwa kufambisa chidzitiro chemhando yepamusoro uye resolution (saka mushandisi anongedzerwa kuVR), uye imwe yacho skrini iri nyore kufamba, iine madota mashoma. Kana iko kuri kuenzanisa kwakaringana, tinogamuchira octopus sechipfuwo.
Ini ndinotora mazwi: «Vanotsigira veGalaxy Note 7 vanoti, zvakarurama, iyo terminal yeiyo hofori yeKorea inofanirwa kuita rimwe basa […] ».
Speed ​​miedzo yagara ichiitwa, ikozvino isu tinofanirwa kumira kuzviita nekuti kambani ingade kuisa yakakwira skrini resolution? Kana kuenzanisa kwacho kusina kunaka, kunofanirwa kunge kuri kusarongeka kuti imwe yaive nekaviri-musimboti uye 2 ye RAM uye imwe yacho 4 ye RAM uye octa-core, ndiko kuti, yakapetwa kaviri RAM uye makumbo mana. Hazvisi izvo zvinonakidza kuzviisa pane zvakanyorwa.
Iyo iPhone yakanaka asi yakajairika uye yakashongedzerwa nhare mbozha uye mushandisi anoti nezve 2G kumucheto kusvika kune 6 Plus, chinyorwa uye semuenzaniso iyo S7 iri nani, kutanga neanoshanda system, Hardware skrini uye nezvimwe.
Iyo iPhone inokurumidza kana echokwadi yangu Casio karukureta yakafanana, iwe unogona kupinda mukati uye kuteedzera faira kwaunonzwa kuda kwaro, handiti? Iwe haugone kuita hafu yezvaunogona neApple.
Uye zvechokwadi iyo dombo riri mukorona haisisiri Android uye iOS nezvose iwe unogona kuita zvakafanana, zvakaganhurirwa neIOS iwe uchafanirwa kutamba zvakanyanya neiyo inoshanda system kuita zvinhu zviri nyore kwazvo neApple.
Iyo chishongo mukorona ndeyechokwadi chaicho, pasina kupokana avo vari kuyedza izvozvi zvakafanana nezvatakange taenda kuburikidza neiyo iPhone Edge, zvinoshamisa.
Ini ndinorangarira iyo iPhone Edge (2G) pakanga pasina kopi nekunamatira, uye zvinhu zvisingaperi, isu tiri munzira imwechete.
Iyo chete yekudzikira ini yandinogona kuisa pasi izvozvi kurema kwemagirazi uye kupfeka magirazi (iwo makuru).
ASI kana yaiswa, chinhu chakakosha kwazvo zvirimo uye zvakagoneswa kwazvo, pane zvemukati zvemhando yepamusoro uye zvinonyanya kubatsira ndezvekuti tine chaiyoiyo porn iyo yekuda kubuda, haisi kutarisa bhaisikopo, iri iyo bhaisikopo, 😛 zvakadaro inoyeuchidza hahahaha
Ini handina mubvunzo kuti anopfuura mumwe chete anoita kurambana.
Zvakaoma kwazvo kutsanangurira avo vasati vaedza asi kuti vataure chimwe chinhu semuenzaniso.
Tinogona kutora iyo 16-bit super Nintendo uye Playstation 4, isu tinofananidza zvese uye mutsauko uri, mudiki kwazvo kana tichitaura nezvechokwadi chaicho. Zvingave sekutaura kuti Playstation 4 yakafanana neiyo 16-bit super Nintendo.
Iwe unofanirwa kuratidza kuti hapana nzira yekutsanangura musiyano uripo kana uchishandisa chaiyo chaiyo. Kuri kuva kune imwe nzvimbo asi kwete chete kuona uye kutora chikamu mazviri.
Huye, porn inofambisa makomo uye izvi zvinoshamisa.
Usavhiringidze 3d neVR chimwe chinhu zvachose.
Iko kurongeka kwehutsinye uko iyo Inotarisisa 7 inayo uyezve iyo Galaxy S7 haina chinhu muVR, kutevedzera bhaisikopo remitambo uye kutarisa (kuve mumamuvhi kwakaringana) asi kufambisa mashandisiro iyo hutsinye Hardware yeGPS S7 semuenzaniso yakafanana nekushandisa Nintendo-16-bit haina kukwana, kufambisa nyika yese inoda yakawanda Hardware uye ine hutsinye seCherechedzo 7 ingaratidzika, ichiri zvishoma kuVR.
Iyo VR yazvino yakafanana neiyo iPhone Edge 2G, mutorwa uye kuti munhu wese (mumugwagwa) akaipotsa.
Nokia yaive iyi neiyo.
Ah, ikozvino zvinoitika kuti huwandu hwe RAM uye huwandu hwemakores hwakakosha mushure mekuverenga nekuteerera chiuru nguva muma podcast kuti chakakosha chinhu chiri mhando kwete huwandu. Zvakanaka, ndinogamuchira octopus.
«Kana kuenzanisa kuri kusaruramisira, sekusaruramisira Kunge[…] ».
Kubva kuvakagadziri ve «1 GB ye RAM inokwana kufambisa iyo system» inouya «iyo octa-core kusaruramisira».
Uye kubva kuvakagadziri ve "bhiza hombe, famba kana kusafamba" anouya "hazvina kurongeka kuti bhiza rangu rinomhanya nevamwe."
Ooohhh wakaremadza simba rekupindura kwauri, mukuru wedemokrasi. Ndiro rinofanira kupera kupokana. Uye usazvidya moyo, kana ukasazozvitumira, ini ndinozvinyora paTwitter kuti pasi rose rione.
Handina kumisa chero chinhu. Kana iwe ukacherekedza, haugone kupindura kumashoko ako ekupedzisira futi.
Nharo dzangu dzakapfuura nyore.
1- Kumhanya ndiko kumhanya. Musoro wenyaya yacho unosanganisira mazwi "Speed ​​Bvunzo."
2- Zvakakosha: Kana mumwe munhu akataura kuti hazvina kunaka, ndinotaura nezveimwe pfungwa yekusaruramisira kuenzanisa zvinhu.
3- Chinhu che RAM chiri nyore sevaya vakagara vachidzivirira kuti zvakafanira (tichitaura nezvese zvataurwa), ikozvino taura kuti haina kufungwa. Sezvazviri muchikamu chechipiri, kana mumwe munhu akataura nezvekusarongeka, zvese zvinofanirwa kunge zvakaenzana.
PD: Democracy ichavei nechekuita nenyaya yekufungidzirwa yekumisa kutaura? Nezveruzivo rwako, Democracy inouya kubva muchiGiriki uye kubva kumazwi "démos" (vanhu) uye "krátos" (simba kana simba). Democrat ndomumwe anobvumirana nedemokrasi. Ini handioni "simba revanhu" chero.
Hauna kutumira mhinduro kwandiri, huh? Ini handikupe mhosva, pamwe hauna kuziva chekupindura.
PS: Kana iwe uri akangwara zvirinani kudzidza Plutarco.
Handina chandakadzima. Pamwe mumwe mupepeti akazviita nekuda kwe "inozivikanwa emoji", ini handizive zvaunotarisira pakadai.
Kune rimwe divi, ini handifanire kudzidza chero chinhu, iko kushandurwa kwekukurumidza kuti kunzwisiswe, senge, semuenzaniso, kushandura chirevo "kick mbongoro" kubva kuChirungu se "tsvimbo". Ini handizive chakanyanya, kududzira "kupa" sevanhu kana kudaidza munhu asina chaakaita "democrat". Ndiri kutsanangura zvakawandisa, izvo zvandisingafanire kumaka iyo blog se "inozivikanwa emoji."
Handina kutaura izvozvo nezve blog (dai zvaive zvakadaro, ini ndaisazongopinda), asi nezve kuvhiya, zvinoenderana neanoonekwa mune zvakataurwa. Kana iwe unofunga kuti chokwadi chekuda kuisa gumi makomendi kuti upindure kwauri chiri nekuda kwekuita kwakanakisa?
Zvisinei, iva nezuva rakanaka.
Iphone chaiyo chaiyo 0 ... Ini handidi kana chipo.
Ini ndinoda kunyange giraxy S6 pane iyo iPhone 9 isina chaiyo chaiyo.
Iko hakuna ruvara pakati peimwe neumwe, chinguva chakapfuura ndakaenda kubva kuIos kuenda kuApple uye ruzivo rwangu rwakava nenjodzi, pasingasviki gore ndakadzokera kuIOS. Ini ndinoda yazvino Samsung uye vanoita senge cucumber kwandiri asi inokwidza iyo Android toner.
Iyo isinganzwisisike iyo fananidzo, zvinoonekwa kuti iye haazive izvo zvaari kutaura nezvazvo. Nyadzi. 100 x 100 Samsung pasina kupokana.
Apple inoronga iyo itsva iPad 10,5 "ye2017